Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa, Isaia 40.31 – FJKM Ambavahadimitafo Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa, Isaia 40.31 |
Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa, Isaia 40.31
I Fa izay miandry an’i Jehovah
Ny miandry dia izay manantena valiny. Ny miandry dia izay mivavaka tsy mitsahatra. Sarin’ny zazavavy miandry ny malalany eo am-bavahady amin’ny takariva izany fahamalagasy ary koa sarin’ny raiamandreny miandry ny zanany avy lavitra eo andrefan-tanana ka tsindrian-daona be ihany ary mety ho sarin’ny vahoaka miandry ny mpitondra hafatry ny lehibe. Ity farany no manakaiky kokoa izay lazain’i Isaia. Ny fiandrasana ny maraina ao ambadiky ny fahababoana no lazaina eto. Tsy mora ny miandry ny fotoam-panafahana satria ny manodidina rehetra mandiso ny fampanantenana fanafahana avokoa. Sarotra ny lalana mody any Jerosalema ary ny babyloniana fahavalo mandatsa sy manakivy! Ny vontoatin-kafatr’i Isaia anefa no milaza fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa. Eny an-dalana ny Fiangonan’Andriamanitra dia ny Zanak’Israely ary mizotra hody avy any am-pahababoana saingy tsy izy rehetra no manantena ho afaka fa ireo antsoina ho ny sisa ihany ! Izany hoe ireo salohim-boaloboka tsy voajinja ho amin’ny fanaovan-divay fa ireo miparitaka eny an-dalana ka tsimponin’ny izay mahita dia ireo tsy mba manana tanim-boaloboka fa miasa isan’andro aman’olona.
Ry Fiangonan’ny Fanekena Vaovao ! Moa tsy notsimponina teny ivelan’ny tanimboaloboka izaho sy ianao! Izay tsy firenena akory fahiny anefa efa tonga ankohonan’Andriamanitra ao amin’ny Faneken’ny Batisa ankehitriny? Ny tsy fahafantaranao izany toerana misy anao izany no tsy ahitanao fiadanana amin’izao fanarahana ny Tompo izao. Tsy mandeha ho azy ny mahaKristiana fa tsy maintsy hadihadiana lalina. Fanomezana ny fiainana ary nantsoina maimaim-poana isika saingy mitaky fanetren-tena izany satria ny fandavan’ny jiosy ny famonjena no nahazoantsika toerana. Samy miandry ny Mesiany na ny Jiosy na ny Kristiana saingy iray ihany ve ireo? Ny tahirin-tSoratra jiosy sy kristiana dia mampitovy ny sarin’Ilay ho avy dia ny Mpanjaka be voninahitra! Anefa tsy tokony hijaly ny Mesia hoy ny Jiosy ary tsy i Jesoa Kristy no Mpanjakany; ny kristiana kosa manamafy fa Ilay nijaly sy maty no hiverina amim-boninahitra eny amin’ny rahon’ny lanitra. Ny tsara indrindra dia ny mitodika amin’ny famantaran’ny fotoana dia fanjakan’ny haizina madiva hifarana. Isaky ny migadona ny taom-baovaom-piangonana dia miaina io fanafahana io isika ary izany no mahafaly satria mitsahatra ny fanaintainana. Efa akaiky ireo alahady 4 mialoha ny Krismasy koa miomana fatratra isika hitsena Ilay avy ho amin’izao tontolo izao; tsy amin’ny hery sy fitsarana anefa fa amin’ny fietrena lalina sy ny fahalemem-panahy! Jesoa zazakely; endriky ny fahalemen’Andriamanitra manoloana ny hery setran’olombelona anefa koa fanomezana olona ho solontsika amin’ny fanefana ny trosam-pahotantsika!
Tsy haizina mifarana ve ny taom-piangonana tonta sy tsy sahaza antsika intsony? mifarana ny tsy fahombiazana sy ny havizanana ary ny fijaliana amin’ny endriny rehetra; ny fiovaovana ateraky ny zava-misy tsy niomanana sady sangodim-panina isanandro ary izany fangirifiriana izany no atsahatra iray volana mialoha ny Krismasy manomboka ny 28 Novambra. Io no fiandohan’ny Taona vaovao ka ny fizarana voalohany dia antsoina hoe Advento na Avent izay ampiasantsika ny loko litorjika maitso, sarin’ny ahitra fiandrasan’ondry sady fialan-tsasatra; manondro fanantenana ihany koa dia fanantenana tsy mampahamenatra sady vato fantsiky ny aina.
2. Dia mandroso hery kosa
Ny manantena ihany no tsy resy ety an-tany hoy ny Mpanakanto ary mihoatra lavitra noho izany ny fanatenana kristiana satria io no fanantenana tsy mamitaka ary avy amin’izany no loharanon-kery; io no solika manodina ny finoantsika. Raha mandeha lavitra ianao ka sambany vao nandeha io lalan-davitra io ary nandeha tontolo andro dia tsaroanao fa arakaraky ny itsinjovana lavitra ny toerana itodianao no ahatsapanao fifaliana fa efa akaiky ny tanjona. Tsy tahaka izany izay lazain’Isaia eto fa tena mifanohitra amin’izany. Tsy ahita-mitsinjo ny fahoriana ary manjaka tanteraka ny haizina. Mandrovi-tsihy Satana fa efa hifarana ny asany ary tsy mitsitsy ny aintsika ny fahavalo fa manao jinja fary! Saingy ny mahagaga dia izao; ao anatin’ny haizina no miposaka ny mazava; tsy hitan’ny maso anefa fa raha izany dia hazavana mandalo fa Ilay Mazava tokana dia Ilay anton’ny finoantsika: Jesoa Kristy Ilay tsy azon’ny olona raisina na fihinina fa Ilay Misy sy Marina ao anatin’ny finoana dia ny finoana irery ihany «Sola fides». Hoy Pascal olon-kendry milaza izany: ‘Jesoa Kristy tonga tao amin’ny haizina be loatra dia tsy hitan’ny olona akory ka ny zava-malaza tao amin’ny tantara ihany no notanisainy‘
Tsy nahagaga izany satria tsy tao ny finoana. Fiaraha-monina tsy mivelona amin’ny fanantenana no nisy hatry ny ela ka nandroba izay hitan’ny masony. Tsy toy izany kosa ny Kristiana fa ahitsin’ny Tenin’Andriamanitra ary velominy isanandro. Zava-dehibe ny fahalalana fa ny finoana no ahitana an’i Jesoa fa sanatria tsy ny fahitana no miteraka finoana! Ny famantarana dia natao ho an’ny efa mino handrosoany amin’ny fanarahany ny Tompo fa tsy natao ho an’ny tsy mino velively. Tsy manampy amin’ny finoana ny famantarana fa vao mainka mampihemotra aza. Izany no antony tsy ahitan’ny olona afa-tsy fahoriana ka mahatonga azy himonomonona satria tsy mahita afa-tsy ny fahavoazana izy. Rehefa mihaona ny kristiana dia mifanakivy noho ny hasarotry ny fiainana; ny fahaverezan’asa, ny orana tsy mety latsaka, ny asan-jiolahy; ny fikorontanana isan-karazany.Azo tanisaina ireny saingy farano toy izao ny resaka: Tia anao Andriamanitra ka saro-piaro aminao ary manao izay itodihanao Aminy isanandro ary manefy anao hahazaka fitondrana atao amin’ny zanaka tiana! Izany haizina mitankosina izany tokoa raha sainina no miteraka fahoriana ary ny fahoriana, ara-tSoratra Masina, raha ampiasaina no miteraka fahatsaram-panahy voazaha toetra. Ny kristiana raha mijaly vao mainka mihavao; fa ny ratsy fanahy kosa vao mainka miharatsy hatrany. Aiza ho aiza ary izao ianao?
Efa ho lasa ny alina; aoka hiomana isika ary aoka hirehitra ny jirontsika satria ho avy Ilay tsy mitaredretra. Mivavaha ary miambena! Hoy ny vavaky ny Fiangonana hoe « Avia Jesoa Tompo» Ary hoy ny Tompo: « Eny avy faingana Aho!». Amena.
Rakotoniera Christian Eric Mpitandrina